Myanmar Labeling Law | Happy Sales - POS Supply
ကုန်ပစ္စည်းတွေမှာ မြန်မာလိုအညွှန်းတွေ တပ်ပြီးပြီလား?
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စားသုံးသူကာကွယ်ရေး ဥပဒေကို ၂၀၁၉ ခုနစ် မတ်လ ၁၅ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ ပြဋ္ဌာန်းထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ပြဋ္ဌာန်းပါအချက်များအရ - "စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ ဤဥပဒေ အခန်း(၁၈)ပါ ကုန်အညွှန်း အမှတ်အသားဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် ဥပဒေကိုထုတ်ပြန်ပြီး တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်သည့်နေ့တွင် အာဏာတည်စေရမည်"လို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
သို့ပေမယ့် သတိမထားမိသေးတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်များလည်းရှိနေနိုင်သေးတဲ့အတွက် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီး အမြန်ဆုံးလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြဖို့လည်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။
"Labeling Law"ဆိုတာ ဘာလဲ?
မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေး ကော်မရှင်ကနေထုတ်ပြန်ထားတဲ့ (ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ) ကုန်ပစ္စည်းအညွှန်းအမှတ်အသားဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက် ဥပဒေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
"Labeling Law"ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ?
-စားသုံးသူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်မှုတွေကို ကာကွယ်ပေးရန်
-ကုန်စည် (သို့) ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်များကို စားသုံးသူများမှန်မှန်ကန်ကန်သိရှိ၊ သုံးစွဲနိုင်စေရန်
-စားသုံးသူတို့အတွက် ဘေးအန္တာရယ်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ ကုန်စည် (သို့) ဝန်ဆောင်မှုများကို ထိရောက်စွာ အရေးယူခြင်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် မိမိလုပ်ငန်းကထုတ်လုပ်လိုက်သော ကုန်စည်များမှာ ကုန်ပစ္စည်းအညွှန်းအမှတ်အသားများကို မြန်မာဘာသာဖြင့်ဖော်ပြပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများအား တိုင်ကြားမှုများရှိလာပါက စစ်ဆေးကာ စားသုံးသူကာကွယ်ရေး ဥပဒေအရ ထောင်ဒဏ်(၂)နှစ်နှင့်အထက် (သို့) ငွေဒဏ် သိန်း(၂၀၀)ကျပ်နှင့်အထက် (သို့) ထောင်ဒဏ်ငွေဒဏ် (၂)ရပ်လုံးနဲ့ အရေးယူသွားမှာပါ။
ဒီလိုအရေးယူမှုတွေ မခံရလေအောင် လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ညီမတို့ရဲ့ Happy Sales - POS Supplyဆိုင်ကြီးကနေ ကူညီပေးပါရစေရှင့်။
လူကြီးမင်းတို့လုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းအညွှန်းအမှတ်အသားတွေကို အလွယ်တကူထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ Desktop Label Printerတွေ၊ Protable Label Printerတွေ၊ Paperတွေ၊ Ribbonနဲ့ အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ စိတ်တိုင်းကျဝယ်ယူအားပေးလို့ရနေပါပြီ။
စက်တွေ Supplyတွေဝယ်ဖို့ အဆင်မပြေသေးတဲ့ တနိုင်တပိုင် လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်လည်း စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ Labelလေးတွေကို ညီမတို့ရဲ့ Happy Sales - POS Supplyဆိုင်ကြီးမှာ Printing Serviceအနေနဲ့ ထုတ်ပေးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အခုပဲ လှမ်းလာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေရှင့်။
# Label Legal